:: My Little World ::: 2010
ကြိုးကြာသံ - ခင်မောင်တိုး
မိုးဦး ၀င်ရောက်လာတဲ့အခါ ရိုးမပေါ် ဖြတ်ပျံရင်း
ကြိုးကြာငှက်တို့ရဲ့ မိုင်ထောင်ချီ ခရီးစဉ်
မျိုးဆက်ရဲ့ အားမာန်တခုပါ လမ်းကြောင်းမှန် ရွေးချယ်ခြင်း.
မွေးဖွားရာအရပ်ဆီ၊ မိုင်ထောင်ချီ ပျံနေရင်း
ကြိုးကြာငှက်တချို့ လေ ချီလာစဉ် ကျန်ရစ်ပြီ
ဆုံးဖြတ်ချက် တခုကျမယ့် ..
ရှိသင့်တဲ့ အားနဲ့မာန်.... ဟန်နိုင်မှ
ချဉ်းနင်း ၀င်ရောက်လာ ပြီးရင်
ကြိုးကြာငှက်တို့ရဲ့ မိုင်ထောင်ချီ ခရီးစဉ်
ကြိုးကြာသံနှင့်မုန်တိုင်းစင်ရော် (သို့မဟုတ်) ပျံသန်းခြင်းအနုပညာ - ချစ်ဦးညို
Posted by Nay Nay Naing at 8/30/2010 11:40:00 AM5comments
နေ့ လည်စာ ထမင်းဝိုင်း
Sunday Lunch (2010-08-29)
ငါးဖယ်ဆီပြန်၊ ချဉ်ပေါင်နဲ့ပုဇွန်ကြော်၊ ဆိတ်သားဟင်း၊ ပဲကြီးဟင်း၊ ငါးပိကြော်၊ သခွားသီးတို့ စရာ၊ ငုံးဥကြော်၊ ကြက်သွန်ကြော် နဲ့အချဉ်။
သောကြာနေ့ ညနေ ပင်နီဆူလားမှာ သွားဝယ်လာတဲ့ ငါးဖယ်ကို ကြော်ပြီး ခရမ်းချဉ်သီးနဲ့ဆီပြန်ချက်ထားတာ
ဒါက ချဉ်ပေါင်ကုို ပုဇွန်နဲ့ ကြော်..
ငုံးဥကိုပြုတ်ပြီး မုန့် နှစ်နဲ့ ကြော် ... ကြက်သွန်ကြော်..
အကြော်စုံနဲ့အတူ စားဖို့ အချဉ်
မန်ကျီးသီးနှစ်၊ ငရုတ်ဆီ၊ ဆား၊ သကြား၊ ငရုတ်သီးစိမ်း
ရန်ကုန်က ပို့ လိုက်တဲ့ ပုစွန်ခြောက်ငါးပိကြာ်.. စနေ နေ့ ကမှ သွားယူထားတာ
တို့ စရာ အနေနဲ့သခွားသီး
Posted by Nay Nay Naing at 8/29/2010 07:05:00 PM7comments
ရိုးမရဲ့ ညနေခင်းလေးကိုတောင် ...
အလှကြည့်ဖို့မအားပါ ခင်ဗျာ...
တောင်ပေါ်မှာနေ.. တောင်ပေါ်မှာဝေ.. တောင်ပေါ်မှာကြွေ..
သစ်ရွက်တွေလို ..တို့ ဘ၀ဟာလည်း
ရိုးမရဲ့ ညနေခင်းလေးကိုတောင်... အလှကြည့်ဖို့ မအားပါခင်ဗျာ..
လူတွေလူတွေ အသက်စွန့် ကာလေ ကြိုးပမ်းနေဆဲ..
Posted by Nay Nay Naing at 8/24/2010 10:14:00 PM5comments
"Two hearts that beat as one" on "August 19, 2010"
May the promise you two make today
Change your world inawonderful way.
Wishing You All the Joy ofaLong and Happy Marriage Life!!!!
Posted by Nay Nay Naing at 8/19/2010 10:05:00 AM3comments
အတောင်ပံမပါတဲ့ ဘိုင်စကယ်သတင်းစာ အိမ်ပေါ်အရောက်ပျံသန်းလာ
လာမယ်ကြာမယ်.. ယာဉ်ရထားတွေ မနိုင်ဝန်ထမ်းကာထွက်ခွါ..
နေပြည်တော်ကို လွယ်အိတ်တစ်လုံးနဲ့ခြေလျှင်တိုင်းခန်းလှည့်လာ
ရန်ကုန်ရင်ပြင်ပေတရာဈေးမှာ သမင်လိုက်ပွဲနဲ့ တိုးကာ..
ကော်ဖီဆိုင်မှာ လူတချို့ ဟာ လေသေနတ်နဲ့စစ်တိုက်နေတာ..
နိုင်ငံတကာက မော်တော်ကားတွေ ခြေစုံရပ်ကြည့်မောကာ
ကိုယ်ပိုင်ဆိုရင် တာယာဖိနပ်ဟာ ဖင်နောက်မြှီးတစ်ပိုင်း ပြတ်ကာ
အဆီပြန်နေလောင် ဆံပင်တွေမွဲကာ ၀င်ငွေအလုပ်မှန်လိုက်ရှာ
အကြိမ်ကြိမ်အဖန်ဖန် လီဘာလဲကာ ကြံရာမရတဲ့ နောက်ဘိတ်ဆုံးမှာ..
ကားလမ်းဘေးက ဗေဒင်ဆရာရေ အားကိုးစမ်းပါရစေ..
ကြီးပွါးကိန်းတော့မြင်နေပြီလေ ဟောကိန်းထုတ်လို့ နေ
အိတ်ကပ်ထဲက အကြွေတွေ အပြင်ကိုမျက်စပစ်လုို့ နေ..
လောလောလတ်လတ် ထောင်ကိုမြင်ရင် ရာကိုစွန့် ကာ...
ထီတစ်စောင် တစ်ကျပ်နဲ့ထိုးကာ..
မည်သူမဆို နေပူထဲမှာ မျှော်လင့်ခြင်းရဲ့ မျက်နှာ..
Updated the Links. Thank, Ma KOM and SDL..
Posted by Nay Nay Naing at 8/15/2010 09:16:00 PM5comments
ယနေ့ မွေးနေ့ မှသည် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်အောင် စိတ်ချမ်းသာ၊ ကိုယ်ကျန်းမာစွာဖြင့်
အောင်မြင်ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့သော ဘဝကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ။
Posted by Nay Nay Naing at 8/08/2010 01:33:00 PM9comments
It's my Lunch..
ပုဇွန်လုံးလေးတွေ ခေါ်မလား သေးသေးလေးတွေ ကြော်ထားတာ စားကောင်းတယ်
အကြော်ဆို တစ်ပန်းကန် နဲ့အာသာမပြေ..
လည်ချောင်းခြောက်လို့အရည်သောက်..
ငရုတ်ကောင်းလေးပါတော့ သောက်လို့ ကောင်းတယ်
ထမင်းလေးတော့ နည်းနည်း စားအုံးမှ
ခံတွင်းရှင်းတဲ့ အနေနဲ့ .. မာလကာသီး၊ နှင်းသီးနဲ့ရှောက်ချိုသီး
တကယ်ဆို စူရှီး လုံးဝ စားလေ့မရှိ... အခု နည်းနည်း ယူစားလိုက်တယ်..
ပြီးတော့ အသီးနည်းနည်း ယူစားလိုက်တယ်..
ဒါပေမယ့် ဆီကြော်အရမ်းစားတာမကောင်းဘူးဆိုပြီး ဒါလေးပဲ ထပ်စားလိုက်ပါတယ်..
ဒါနဲ့အတူ Soup တစ်ခွက် အအေးတစ်ခွက်ထပ်သောက်...
Paul... ငါ.. နင့်ကို မမေ့ပါဘူး...
အိပ်ပျက်တာများလို့ ထင်တယ်။ ခေါင်း နည်းနည်း ကိုက်နေတယ်။ ဒီနေ့ လည်စာတော့ ဒီလောက်ပဲ စားနိုင်တယ်။ မစုံဖူးပေါ့။ ဒါပေမယ့် မကြာခင် ပြန်ဆုံ ကြအုံးမှာပဲဟာ။ အဲဒီအခါမှာ အကုန် စုံအောင် ပြနိုင်အောင် ကြိုးစားပါ့မယ်။
Posted by Nay Nay Naing at 8/07/2010 10:24:00 PM 8 comments